FITSABOANA VOALOHANY “URGENCE”: Hatao maimaimpoana avokoa eny amin’ireo hopitalim-panjakana – Free News
lundi, 18 octobre 2021 - 9:23
Nitokana ny service d'urgence vaovao ao amin'ny HOMI ny Filoha Andry Rajoelina.
Accueil/Songadim-baovao/FITSABOANA VOALOHANY “URGENCE”: Hatao maimaimpoana avokoa eny amin’ireo hopitalim-panjakana
Ho fanamarihana ny fankalazana ny faha -130 taonan’ny hopitaly miaramila Soavinandrina dia napetraka ho tsangambato fanamarihana izany ny fanitarana sy fanavaozana ny sampandraharaha Hamehana. Tonga nitokana ny fotodrafitrasa vaovao ny Filoha Andry Rajoelina omaly. Nandritra izany no nanambarany fa ho maimaimpoana avokoa ny fitsaboana voalohany amin’ny vonjy aina any amin’ny Hopitaly isaky ny renivohi-paritra manerana ny Nosy.
Tsy andoavam-bola intsony manomboka izao ny fitsaboana voalohany eny amin’ireo sampandraharahan’ny vonjy aina amin’ireo hopitaly lehibe rehetra ahitana izany sampandraharaha izany. Tafiditra ao anatin’izany koa ireo hopitaly eny amin’ny renivohi-paritra manerana ny Nosy. Toromarika no nomen’ny Filoha ireo tomponandraikitra eo anivon’ny fahasalamana fa ireo marary rehetra tonga manatona ireo sampandraharahan’ny vonjy aina dia tsy maintsy raisina avy hatrany ary tsy mandoa vola izy ireo. Efa misy ny tetibola natokan’ny Fitondram-panjakana ho amin’izany ary efa mipetraka ihany koa ny lamina rehetra eny anivon’ireo toeram-pitsaboana maro izay ahitana ny fandraisana an-tanana an’ireo marary izay tena sahirana ara-pivelomana, dia ilay antsoina hoe: “Fonds d’urgence sanitaire”. Ary amin’ny maha “Vonjy Aina” azy, dia fitsaboana faran’izay haingana no hatao, hoy ny Filoha Andry Rajoelina, ka tsy tokony hisy intsony ny fampiandrasana ny olona marary izay tonga, mandritra ny ora maro. Efa nisy ireo ezaka nataon’ny Fitondram-panjakana tamin’ny fandraisana an-tanana ny fitsaboana ireo mararin’ny Covid-19 ary mbola mitohy izany hatramin’izao. Notsiahivin’ny Filoha Rajoelina ihany koa ireo ezaka goavana efa vita sy an-dalam-pahavitana eo sehatry ny fahasalamana dia ny nametrahana CSB 2 miisa 101 manerana ny Nosy sy ny Hopitaly Manara-penitra 13 manerana ny Faritra.
Mankalaza ny faha 130 taona ny HOMI…
Nandritra ny fitokanana ny sampandraharahan’ny “Urgence” vaovao izay tsangambaton’ny fankazalana ny faha 130 taonan’ny Hopitaly miaramila Soavinandriana no nilazan’ny Filoha Andry Rajoelina izany. Noho izany, ity sampandraharahan’ny vonjy aina ao amin’ny HOMI ity no hisantatra ny fampiharana io tolotra maimaimpoana io. Tsara ho fantatra fa nitombo avo roa heny ny fahafaha-mandray ireo olona mila fitsaboana amin’ny hamehana ao amin’ny HOMI. Raha miisa 11 izany teo aloha dia lasa 22 ankehitriny. Marihina fa tetikasan’ny Filohan’ny Repoblika izao ary tafiditra tanteraka ao anatin’ny Velirano fahadimy ny fisitrahan’ny rehetra fitsaboana izay tsy hanavahana sokajin’olona. Araka ny fanazavana hatrany dia marary manodidina ny 160 isan’andro ireo marary zahana amin’ity hopitaly ity, raha manodidina ny 600 isam-bolana no manaraka fitsaboana.
Fampitaovana ny HOMI
Nandritra ny lahatenin’ny Filohan’ny Repoblika no nilazany fa mbola hisy ny fanomezana ireo fitaovana ilaina amin’ny fitsaboana mba ahafahan’ny vahoaka misitraka fitsaboana ara-dalàna. Hisy koa ny fanavaozana ny Scanner ao amin’ity hopitaly ity. Ary ankoatra izay, hisy ny fanafarana fitaovana manokana hahafahana mandidy fo “à Coeur ouvert”. Manam-pahaizana amin’izany ny mpitsabo malagasy, hoy ny Filoha, saingy ny fitaovana no tsy misy, dia tsy maintsy notsaboina tany ampita foana ireo mararintsika hatramin’izay. Manoloana izany indrindra dia nitondra ny teny fisaorana sy fankasitrahana tanteraka ho an’ Andriamatoa Filohan’ny Repoblika ny Minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny Jeneraly Rakotonirina Richard sy ny Tale Jeneraly mitantana ny toeram-pitsaboana, ny Jeneraly Rakoto ny amin’ny fahatanterahan’izao fotoana izao satria dia avy aminy no nahazoana izao fotodrafitrasa vaovao izao satria dia tamin’ny vanim-potoana nitsidihany ny hopitaly no nahitany ny fahanteran’ny toerana ka nanapahany hevitra ny hanitarana ity toerana ity.
TRANGA MAHERIN’NY 800 ISANANDRO : Hirosoana ny fihibohana sa tsia ?
FANOVANA GOVERNEMANTA: Hosoloina ireo tsy maharaka, tsy ho kitihina ny Praiminisitra
SATAN’NY MPANOHITRA, TVM SY RNM, VAKSINY,… : Nitondra valin-kafatra ho an’ny mpanohitra ny Minisitra Lalatiana Andriatongarivo
FANAMAFISANA NY MAHA IZY ARA-KOLONTSAINA : Navoaka tamin’ny fomba ofisialy ny boky « Ny Fiandohan’ny Malagasy »